22 matoor dhaliyaha khadka tooska ah | Abuurista khadka tooska ah
Weligaa ma dareentay baahida loo qabo in la abuuro nooc garaaf ah oo ma aadan haysan eraygaaga processor ama barnaamijkaagu gacanta ugu jiro inuu sameeyo? Hagaag, taasi dhib maahan hada, oo matoorrada garaafka ee khadka tooska ah waad iska hilmaami kartaa.
Waa inaan ka bilownaa aasaaska in matoor-gacmeedku uu yahay koronto aan nafteena ku sameyn karno qalab loogu talagalay jQuery ama MooTools, markaa adeegyadan sidoo kale waa kuwo dhiirrigelin leh haddii aad rabto inaad dhisto mid kuu gaar ah.
Dhammaan ka dib boodka lala xiriirinayo sawirradooda u dhigma, laakiin haa, Ingiriisiga (sida ugu dhow wax walba, maxaan sameyneynaa).
Qoraalka maanta, waxaan dooneynaa inaan ku iftiimino qaar ka mid ah adeegyada ugu fiican ee webka kuu oggolaanaya Abuur jaantusyo iyo garaafyo kaladuwan on-the-fly. Intooda badani way fududahay in la isticmaalo oo xitaa miyaadan ka walwalin naqshadeynta. Wax soo saarku wuxuu u fiicnaan doonaa sida aad ku aragto shaashadaha shaashadda hoose. Liiska buuxa boodka ka dib
Shaxda hodanka ah
Ka abuur shaashad Flash ah mid lagu raaxeysto oo soo jiita biraawsarkaaga.
DIY (Adigu naftaada u samee) Shaxdu waa aalad ku saleysan Websaydh, fudud oo awood leh si loo abuuro jaantusyo is dhexgal ah iyo garaafyo laga soo qaado xogta ma guurtada ah ama firfircoon ee laga yaabo in lagu soo saaro iyadoo la adeegsanayo luuqad kasta oo qoraal ah.
Generator Shaxda internetka
Shaxda ugu wanaagsan ee khadka tooska ah iyo qalabka matoor garaafka ah, Abuur garaafyo 3D la yaab leh isla markiiba dhowr ilbiriqsi gudahood.
Chartle.net waxay jeexjeexaysaa kakanaanta iskudarsanaanta aragga ee internetka - waxay bixisaa fudeyd, isdhaafsi iyo is-dhexgal istiraatiijiyadda jadwalka internetka.
ChartGo waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay si dhakhso leh ugu abuuraan jaantusyo khadka tooska ah oo ay si fudud ugu dhejiyaan xogtaada aagga xogta shaxda isla markaana ku dhufato badhanka shaxda abuurka.
Xaqiiqdii waad ku sameyn kartaa garaaf faahfaahsan Abuur Sawir oo arag sida ay u ekaan karto, ka dibna daabac, soo dejiso, ama emayl u soo dir wixii aad abuurtay.
Qalabka Shaxda ayaa sameeya jaantusyo goosgoos ah oo ku saleysan xogta aad bixiso. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad qortid xogtaada iyo magaca qaybaha.
Xawaare midab leh
Piecolor waa qalab abuuraya jaantus goobeed leh midabbo si fudud si fudud.
Jaantusyada Hohli waxay kuu oggolaaneysaa inaad si firfircoon u abuurto jaantusyo.
Generator Shaxda CSS
CSS Chart Generator wuxuu abuuraa jaantusyadaada duulimaadka.
Shaxda Google API iyo shaxda matoor jaantuska.
Generator-ka Adeegga Shaxda API.
Qalabka Shaxda Google
Qalabka Shaxda Google wuxuu awood u siinayaa ku darista jaantusyada tooska ah bog kasta.
amCharts Tifatiraha Muuqaalka
Tifatirahaani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u isticmaasho amCharts adeeg internet ahaan ah. Tani waxay ka dhigan tahay in waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ay tahay inaad jaangooyo jadwalka oo aad ku dhajiso lambarka HTML ee la soo saaray boggaaga HTML.
Shaxda Pie Chart
Qalabkan bilaashka ah wuxuu kuu soo bandhigayaa shaxdaada shaashadda sidii sawir aad ku keydin karto kombuyuutarkaaga.
Koontadaada bilaashka ah ee ChartGizmo waxaad hadda ku abuuri kartaa jaantusyo boggaaga, boggaga iyo astaamaha shabakadda bulshada.
Oncharttool.com waxaad ku qaabeyn kartaa oo ku wadaagi kartaa garaafyadaada khadka tooska ah iyo bilaashba.
Generator-ka 'OWTChart Generator' waa aalad on-line ah oo loo adeegsado in lagu soo saaro jaantusyo. Sawir GIF ah oo jaantuska aad cayimay ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda.
iCharts waa shirkad adeeg-websaydh ah oo ka dhigaysa daabacaadda iyo baahinta xogta mid fudud.
Shaxda Google Generator
Abuur shaxda Google ilbiriqsiyo gudahood!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 22 matoor dhaliyaha khadka tooska ah